musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Disney Cruise Line inorambidza vana vasina kubayiwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Kurwisa • Culinary • tsika nemagariro • Entertainment • mafirimu • Health News • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • mumhanzi • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Disney Cruise Line inorambidza vana vasina kubayiwa.
Mitemo mitsva ichange iri chinodikanwa kune vese vekuUS nevekunze vanofamba, zvinonyatso kurambidza vana kubva kunyika dzisingabaye vana vadiki.
Izvo zvakagadziridzwa mutyairi COVID-19 yekudzivirira zvinodiwa zvakaziviswa neDisney nhasi.
New Disney Cruise Line's COVID-19 yekudzivirira mitemo ichatanga kushanda kutanga Ndira 13, 2022.
Vanhu vasingakodzeri kubayiwa nhomba nekuda kwezera vanozofanirwa kupa humbowo hweiyo COVID-19 bvunzo mhedzisiro yakatorwa pakati pemazuva matatu nemaawa makumi maviri nemana zuva ravo rekufamba risati rasvika.
Disney Cruise Line yakazivisa yayo nyowani yeCCIDID-19 yekudzivirira zvinodiwa uye nekuwedzera kukuru kwesimba rayo rekudzivirira nhasi.
Ichitaura nezve nhungamiro yekudzivirira yeUS, ichangobva kuwedzerwa kuti isanganise vana vane makore mashanu, Disney Cruise Mutsetse yakataura kuti vana vadiki se19 vachada kubaiwa hutachiona hweCCIDID-XNUMX kuti vakwanise kukwira ngarava dzayo dzekufamba.
Disney, yekutanga hombe rwendo rwekuda majabs evana, uye akati izvo zvitsva zvinodiwa zvichatanga kushanda kutanga Ndira 13, 2022.
"Patakafamba nechikepe zvakare, hutano nekuchengetedzeka kweVaenzi vedu, Nhengo dzeCast uye Nhengo dzeVashandi ndizvo zvinonyanya kukosha," Disney akadaro mukutaura. "Tarisiro yedu inoramba iri pakushandisa ngarava dzedu nenzira ine mutoro inoenderera mberi nekugadzira mashiripiti kune vese vari muchikepe."
Vanhu vasingakodzeri kubayiwa nhomba nekuda kwezera vanozopa "humbowo hwehutachiona hweCCIDID-19 bvunzo dzakatorwa pakati pemazuva matatu nemaawa makumi maviri nemana zuva ravo rekufamba risati rasvika."
Disney Cruise Mutsetse yakayambira kuti maantigen bvunzo haagamuchirwe uye kuti bvunzo dzinofanirwa kunge dziri bvunzo dzeNAAT, kukurumidza PCR bvunzo kana lab-based PCR bvunzo.
Iyo cruise line ndiyo yekutanga chikamu che Disney kambani kuti vanoda vaccine kune vatengi. Parizvino, mapaki eDisney's theme haana chero COVID-19 yekudzivirira zvinodiwa kune vashanyi. Nekudaro, vese vashandi vekuUS kunzvimbo idzodzo vanofanirwa kubaiwa nhomba yekurwisa coronavirus.
Ngarava dzengarava dzakagara dzakava COVID-19 hotspots mukati memwedzi yekutanga yedenda rekoronavirus, vafambi nevashandi vachibata chirwere ichi en-masse munzvimbo dzakavharirwa dzezvikepe zvegungwa.
Denda iri rakanganisa zvakanyanya indasitiri yekufamba nechikepe, paine mitsetse yakawanda ichienda nekuda kwekukanganisa kweCCIDID-19 uye zvirambidzo zvakatemerwa kufamba pasirese.